အူမကြီးအနာပေါက်ရောဂါ အကြောင်း သိကောင်းစရာ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာ » အူမကြီးအနာပေါက်ရောဂါ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
အူမကြီးအနာပေါက်ရောဂါ အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Ulcerative colitis အူမကြီးအနာပေါက်ရောဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ။
Ulcerative colitis ဆိုတာဟာ Inflammable bowel diseases (IBD) လို့ခေါ်တဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါနှစ်မျိုးထဲက တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောဂါဟာ အူမကြီးအတွင်းဖက်နံရံတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်မှာ Ulcerative colitis ရောဂါရှိမယ်ဆိုရင် အူမကြီးမှာ အနာသေးသေးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒီအနာလေးတွေကနေ သွေးတွေ၊ပြည်တွေ ထွက်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Ulcerative colitis အများစုဟာ အူမကြီးအနောက်ဖက်ပိုင်းမှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေမယ့် အူမကြီးတခုလုံးကိုလည်း ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။
rectum လို့ခေါ်တဲ့ အူမကြီးအနောက်ဆုံးပိုင်းကိုပဲ ထိရင် proctitis လို့ခေါ်ပြီး အူမကြီးအပေါ်ပိုင်း (colon) တခုလုံးကို ထိရင်တော့ total colitis ဒါမှမဟုတ် pancolitis လို့ခေါ်ပါတယ်။Ulcerative colitis ဟာ နာတာရှည်ရောဂါတမျိုးဖြစ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
Ulcerative colitis ဟာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသက် ၁၅-၃၀ နှစ်ကြား မှာ အများဆုံး ဖြစ်ပွါးလေ့ရှိပါတယ်။အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တန်းတူဖြစ်ပွါးလေ့ရှိပြီး မျိုးရိုးလိုက်လေ့လည်း ရှိပါတယ်။
ထူးဆန်းတဲ့အချက်က ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ Ulcerative colitis ဖြစ်ပွါးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
Ulcerative colitis ရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာလဲ။
ရောဂါခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ သွေးဝမ်းသွားတာ၊ဗိုက်နာတာတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် အဖျားတက်ခြင်း၊စအိုမှ သွေးယိုစီးခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နုံးချိခြင်း၊သွေးအားနည်းခြင်း၊အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အရည်ဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း၊အာဟာရဓာတ်များ ချို့တဲ့ခြင်း အစရှိတဲ့ ဝေဒနာတွေကိုလည်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာဆိုရင် တနေ့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားသော လက္ခဏာများဖြစ်တဲ့
· သွေးဝမ်းပိုဆိုးလာခြင်း စတာတွေကိုလည်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားသော နေရာတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ဥပမာ
· အဆစ်အမြစ်များ ရောင်ရမ်းကိုက်ခဲခြင်း။
· ပါးစပ် အနာများပေါက်ခြင်း။
· အရေပြားတွင် နီရဲဖောင်းကားနာကျင်သော နေရာများပေါ်လာခြင်း။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊မျက်စိရောင်ခြင်း၊အသည်းရောဂါများ (အသည်းအဆီဖုံး၊အသည်းရောင်၊အသည်းခြောက်၊သည်းခြေပြွန်ရောင်ခြင်း စသည်)၊အရိုးပွခြင်း၊အရေပြားတွင် အစက်များထွက်ခြင်း၊သွေးအားနည်းခြင်း နဲ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း အစရှိတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါပြဿနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် Ulcerative colitis ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသလိုက်နိုင်ရင် အဆိုပါ ပြဿနာတွေလည်း တခါတည်း ပပျောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ulcerative colitis ဘာလို့ဖြစ်သလဲ။
Ulcerative colitis ဘာလို့ ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ အသေအချာ မသိရသေးပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေ၊အစားအသောက် နဲ့ ကူးစက်ပိုးမွှားတွေက အူနံရံတွေ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ရောဂါပျံ့စေတယ်လို့ တချို့က ယူဆကြပါတယ်။ulcerative colitis ရောဂါခံစားနေရသူတွေရဲ့ အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမွှားတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေနဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွါးမှုတို့အကြားမှာ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုရှိသလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။အခြားသော ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေနည်းတူ ulcerative colitis ဟာလည်း အူလမ်းကြောင်း မူမမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွါးရပါတယ်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်အနေနဲ့ အူမကြီးကို ကာကွယ်ရမယ့်အစား အူမကြီးမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ရောင်ရမ်းခြင်းတွေ၊မလိုလားအပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုဟာ အချိန်အတန် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ (ဥပမာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ)ဟာ ulcerative colitis ကို မဖြစ်ပွါးစေပါဘူး။ဒါပေမယ့် အဆိုပါပြဿနာတွေဟာ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ပိုဆိုးစေတဲ့အပြင် မကြာခဏ ရောဂါထအောင်လည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေမှာ ulcerative colitis ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများသလဲ။
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုရင် ulcerative colitis ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းပိုများစေပါတယ်။
· အသက် : အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွါးနိုင်ပေမယ့် ၁၅နှစ် နဲ့ ၂၅ နှစ်ကြား လူငယ်၊လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
· လူမျိုး : အာရှသားတွေမှာ ဖြစ်ခဲပြီး ဥရောပနဲ့ အာဖရိကသားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
· မျိုးရိုး : မူမမှန်တဲ့ မျိုးဗီဇပစ္စည်း (gene)ဟာ ခုခံအားစနစ်တုံ့ပြန်မှုတွေကို ကမောက်ကမ ဖြစ်စေပါတယ်။သင့်မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ ulcerative colitis ဖြစ်ဖူးသူ/ဖြစ်နေသူရှိရင် သင့်မှာလည်း ဒီရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
Ulcerative colitis ဟာ ဆေးလိပ်မသောက်တတ်သူတွေနဲ့ ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ဒါပေမယ့် ulcerative colitis ကို ကုသဖို့ဆိုပြီးတော့ ဆေးလိပ်သွားသောက်မနေပါနဲ့ဦး။
Ulcerative colitis ရောဂါကို ဘယ်လိုရှာဖွေ ဖော်ထုတ်မလဲ။
· ဝမ်းစစ်ခြင်း : သင့်ဝမ်းထဲမှာ သွေး၊ဘက်တီးရီးယား ဒါမှမဟုတ် ကပ်ပါးပိုးမွှားတွေ ပါဝင်လာခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
· အူလမ်းကြောင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း : ပျော့ပျောင်းတဲ့ ပိုက်ကလေးကို အသုံးပြုပြီး အစာအိမ်၊အစာရေမြိုနဲ့ အူသိမ်တို့ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
· အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း : ရှည်လျားပျော့ပျောင်းတဲ့ ပြွန်လေးကို စအိုထဲထည့်သွင်းကာ အူမကြီးကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါမယ်။
· အသားစယူခြင်း : အူမကြီးအသားစ နမူနာယူပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
· ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း : ပိုပြီးထင်သာမြင်သာရှိစေဖို့အတွက် barium လို့ခေါ်တဲ့ အရည်တမျိုးကို စအိုဝမှတဆင့် အူလမ်းကြောင်းထဲ ထည့်သွင်းကာ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Ulcerative colitis ရောဂါကို ဘယ်လိုကုသမလဲ။
ရောဂါထချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့နဲ့ နောက်တခါ ပြန်မဖြစ်ရလေအောင် ကာကွယ်ဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ရောဂါထစေတဲ့ အရာတခုခုကို သိရှိမယ်ဆိုရင် အဆိုပါ အစားအစာကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
လူတဦးနဲ့ တဦး ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေ မတူညီကြတာမို့ ဆေးဝါးကုသမှုပေးတဲ့အခါမှာလည်း အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ဆေးပေးရပါတယ်။သောက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ခွဲစိတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ulcerative colitis ကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
လူနာအများစုမှာတော့ အောက်ပါဆေးလေးတွေကို သောက်ခြင်းအားဖြင့် သက်သာသွားလေ့ရှိပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်ဆိုးရွားမှု မရှိဖူးဆိုရင် အထက်ပါဆေးတွေကို အသုံးပြုပြီး အိမ်မှာပဲ ကုသနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့ အူမကြီးရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကို ဖြတ်ထုတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ဆိုးရွားတဲ့ အနာတွေဟာ အူမကြီးကို အပေါက်ဖြစ်သွားစေနိုင်လို့ပါပဲ။
Ulcerative Colitis. http://www.medicinenet.com/ulcerative_colitis/article.htm.
Accessed September 10, 2016.
Ulcerative Colitis. http://www.cdd.com.au/pages/disease_info/ulcerative_colitis.html.
What is Ulcerative Colitis? https://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-
bowel-disease/ulcerative- colitis. Accessed September 10, 2016.
Ulcerative colitis. http://www.nhs.uk/Conditions/Ulcerative-
colitis/Pages/Introduction.aspx. Accessed September 10, 2016.
Ulcerative Colitis. http://www.emedicinehealth.com/ulcerative_colitis/article_em.htm.
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေနာ သောကကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ
ကာလကြာမြင့်စွာ နာကျင်မှုကိုခံစားနေရသူများအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ
ခရုန်းရောဂါ အကြောင်း တစေ့တစောင်း